Maxkamadeynta Habré oo dib u furmeysa - BBC Somali
Maxkamadeynta Habré oo dib u furmeysa
7 Sebtembar 2015
Image caption Mr Habre ayaa lagu eedeeyay in xilligii uu Chad ka talinayay dambiyo kala duwan la geystay
Waxaa maanta dib uga durmaya maxkamad ku taalla caasimada Dakar ee Senegal, dhagaysiga dacwadda loo haysto madaxweynihii hore ee Chad, Hissène Habré.
Waxaa loo haystaa inuu gelay dembiyo isugu jira kuwo dagaal, kuwa ka dhan ah aadanaha iyo weliba jirdil.
Dhageysiga dacwadan taariikhiga ah ee ay qaadayso maxkamadda aan caadiga aheyn ee Afrika ayaa soo bilaabatay 20-kii bishii July.
Maalintii koobaad ee dacwadda ayaa Mr Habré waxaa maxkamadda looga saaray qeylo darteed, maalintii labaadna qareenada matalayay ayaa waxa ay diideen inay a soo xaadiraan maxkamadda.
Haddaba maxkamadda ayaa ugu dambeyntii hakisay dhageysiga dacwadda, waxaana ay magacowday saddex qareen oo cusub oo matali doona Hissène Habré, kuwaasi oo la siiyay 45 maalmood si ay u darsaan kiiska.
45 casho kaddib ayaa saddexan qareen ee cusub ee ay maxkamaddu magacowday waxa ay waqti u heleen in ay darsaan kiiska, hasayeeshee ninka ay matalayaan ayaanan aqoonsanayn, waxaana uu diiday in uu la hadlo.
Image caption Hissene Habre hadda waxaa maxkamadeyntiisu ay ka socotaa Dakar, Senegal
Arrintu haatan waxa ay u taallaa in uu wax ka yiraahdo madaxa maxkamadda, Gberdao Gustave Kam, oo ah xaakim u dhashay dalka Burkina Faso, kaas oo go’aansan doona in dacwadda ay sii socon doonto iyadoo Hissene Habre uusan wax qareen ah haysan.
Tan iyo bilowgii dacwadda, Hissène Habré, oo haatan 72 jir ah, ayaa waxa uu diidanaa sharciyadda maxkadan Afrika, taas oo ah mid gaar ah oo uu Midowga Afrika sameeyay sanadkii 2013-ka si loogu maxkamadeeyo dalka Senegal.
Madaxweynahan hore ee dalka Chad ayaa marwalba diidanaa inuu ka jawaabo su’aalaha xaakimka.
Reed Brody oo ka tirsan hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, ayaa rumeysan in diidmada Habré ee ku aadan la shaqeynta maxkamadda uu ku doonayo in uu kaga faa’iidaysto dhaqaalaha yar ee loogu talagalay maxkamadda, kaas oo dhan 9.5 milyan oo doolar.
Dib u dhigga dhageysiga dacwadda muddo 45 cisha ah xilli markii horaba loogu talagalay in dacwaddu ay ku soo gebagabowdo 90 casho ayaa waxa uu kala bar kor u qaadayaa miisaaniyaddii loogu talagalay, waxaa sidaa sheegay Reed Brody.
Kaddib 25 sano oo ay dadka dhibanayaasha ah u ol oleynayaan in Mr Habre cadaaladda la horkeeno ayaa intooda badan waxa ay rajaynayaan in maxkamadan gaarka ah ay soo afjari doonto tobanaan sano oo uu haystay xasaanad.
Waa markii ugu horreysay oo madaxweyne Afrikaan ah lagu maxkamadeynayo dal Afrikaan ah, isagoo loo haysto dambiyo ay ka mid yihiin jirdil, kuwa dagaal iyo kuwa ka dhan ah bini’aadannimada.
Dacwad oogaha ayaa isku dayi doona in uu ku qanciyo maxkamadan gaarka ah in Mr Hissène Habré uu sakhsi ahaan ku amray dilka iyo waxyeelaynta kumannaan qof oo siyaasad ahaan iyo qowmiyad ahaanba ka soo horjeeday.
Guddi xaqiiqo raadin ah oo Chad laga sameeyay ayaa helay caddeyn muujinaysa ku dhawaad 4,000 oo kiisas dil ah, iyagoo qiyaasay in tiradaasi ay 10 jibaar kor u kici karto.